Soomaaliya, 14 December 2018
Khamiis 14 December 2018
Farmaajo iyo Afwerki oo heshiisyo kala saxiixday
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in isaga iyo dhigiisa dalka Eritrea Isaias Afwerki ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal.
Faaqidaadda: Mooshinka laga gudbiyey Farmaajo
Dad badan oo ku dhintay dagaal ka socda Mooyaale
Xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ah mid kacsan maalmihii dhawaa. Maalin walbana waxa ay u muuqataa in ay dhacayaan isbeddelo u muuqda in ay xaaladdu sii fogaaneyso.
C/llaahi Axmed Caddow oo ka hadlay xaaladda dalka
Cabdullahi Axmed Caddow oo mar soo noqdey safiirka Soomaaliya ee Mareykanka, mararna soo noqdey musharax madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka waramey khilaafka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya.
Wareysi: Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya
Muxuu ka dhigan yahay xariga Roobow?
Dowladda Somalia oo xirtay Mukhtaar Roobow
Madaxweyne Afwerki oo booqasho ku tegay Muqdisho
Xiisad siyaasadeed oo weli ka taagan Muqdisho
Mursal "Mooshinka Farmaajo weli waa taagan yahay"